Munaasabad lagu xusayo Mas’uuliyiintii ku baxday ismiidaamintii Aqalka… – Hagaag.com
Munaasabad lagu xusayo Mas’uuliyiintii ku baxday ismiidaamintii Aqalka…
Sanad ka hor maanta oo kale 24-kii bishii July waxay ku beegantahay markii uu qarax ismiidaamin ah ka dhacay aqalka dowladda Hoose ee Xamar kaasoo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad tobon ruux oo uu ka mid ahaa Guddoomiyihii Gobolka Banaadir iyo duqii Muqdisho Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
Waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxaas Guddoomiyaashii degmooyinka Cabdicasiis Marxuumad Sabaax Cabdullaahi, Shangaani Marxuumad Sahro Markesi, Guddoomiyihii degmada Waaberi marxuum Mahad Cilmi agaasimayaal ka tirsanaa Gobolka Banaadir iyo xubno kale.
Qaraxan oo dhaliyey su’aalo badan oo ku saabsan sida uu ku gaaray hoolka shirarka gobolka Banaadir ayaa baaritaan ay sameeyeen hey’adaha amaanka DF waxay ku sheegeen inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo ay fulisay haweeney araga naafo ka ah oo ka tirsaneyd Shaqaalaha gobolka Banaadir inkastoo natiijada baaritaanka la sameeyey uu ahaa mid hordhac ah, waxaana jiray tuhuno la xiriiray in qaraxaas la fududeeyey.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar-Filish) ayaa magacaabay shalay guddi diyaarinayo munaasabado lagu xusayo looguna duceynayo lagu qabto magaalada Muqdisho.
Maanta oo Jimco ah ayaa waxaa muqdisho ka soconayo munaasabadahan, waxaana la filayaa inay ka qeyb-galaan ururada bulshada rayidka iyo madax kale.